बेलायतले शून्य लागतमा दुई हजार नेपाली नर्स लैजाने, पाँच लाखसम्म आम्दानी! - Malayakhabar
होम पेज प्रवास विशेष बेलायतले शून्य लागतमा दुई हजार नेपाली नर्स लैजाने, पाँच लाखसम्म आम्दानी!
बेलायतले शून्य लागतमा दुई हजार नेपाली नर्स लैजाने, पाँच लाखसम्म आम्दानी!
काठमाडौं := बेलायत सरकारले नेपाली नर्सहरूलाई रोजगारीका लागि लैजानेसम्बन्धी सम्झौता शुक्रबार हुने भएको छ। बेलायत सरकारका प्रतिनिधि र श्रम मन्त्रालयबीच सम्झौता हुन लागेको श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्झौतापछि नेपाली नर्स रोजगारीका लागि बेलायत पठाइने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
बेलायत सरकारले नेपालबाट १० हजार नर्सको माग गरे पनि पहिलो चरणमा दुई हजार नेपाली नर्सलाई पठाइने श्रममन्त्री श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार बेलायतले नर्स रोजगारीका लागि अंग्रेजी भाषामा निपूर्ण हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। ‘बेलायत सरकारको सर्तअनुसार नेपाली नर्सले आइएलटिएसमा ७ स्कोर ल्याउनुपर्नेछ । तर, मैले ६.५ स्कोरको अडान राखेको छु’ उनले भने ।
बेलायत सरकार र नेपाली सरकार (जिटुजी) मार्फत नर्सलाई रोजगारीका लागि पठाइने श्रममन्त्री श्रेष्ठले बताए । बेलायत सरकारको सर्तअनुसार जिटुजीमार्फत नै नेपाली नर्सलाई बेलायत पठाउन लागिएको हो । यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनेछैन । बेलायतले ‘नेस नल हेल्थ प्रोग्राम’अन्तर्गत नेपाली नर्सलाई लैजाने भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले नेपाली नर्सलाई शून्य लागतमा बेलायत रोजगारीका लागि पठाउने तयारी गरेको छ ।
रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सको भाषा परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा, टिकट, बिमा लगायत सबै खर्च बेलायत सरकार आफैँले व्यहोर्ने भएको छ । बेलायतमा नेपाली नर्स मासिक पाँच लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने मन्त्रालयले अनौपचारिक जानकारी दिएको छ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार नेपालमा २० भदौसम्म ६७ हजार २२ जना नर्स दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, २३ जना मिडवाइफ, ३५ हजार ३६४ अनमी छन् । तथ्यांक अनुसार २५ हजार भन्दा बढी नर्स बिदेसिएका छन् । नया पत्रिका दैनिकमा खबर छ
अघिल्लो लेख अफगानिस्तानमाथिका प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न चीनको आग्रह।
पछिल्लो लेख तनाव हटाउन अध्यात्मक पुस्तक पढ्दै ज्याकलिन।